VOVONAN’NY MPANOHITRA : Ifandroritana ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra
Nanatanteraka fihaonam-be tetsy Anosy ny fivondronam-ben’ireo antoko mpanohitra eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. 12 août 2019
Ny hetsika fanarenana ifotony no nitarika ny dinika izay nifandrombonan’ireo mijoro ho antoko mpanohitra. Hatreto mbola iadivana mafy ny toeran’izay ho lehiben’ny mpanohitra. Manoloana izany dia notapahina nandritra io fihaonana io fa hanangana rafitra iombonana ny vovonan’ny antoko mpanohitra mba hahafahan’izy ireo mametraka mazava ny foto-kevitra hiatrehana ny raharaham-pirenena. Fantatra fa hisy ny kaomity manokana hatsangana handinika ny vontoatin’io rafitra izay ahitana ny solontena tsirairay avy amin’ireo antoko mpanohitra. Anisany tanjona apetrak’izy ao anatin’ny fananganana an’io rafitra ity ny mba ahafahana miatrika ny raharaham-pirenena.
“Nisy ny fihaonam-ben’ny mpanohitra. Nisy ny fanapahan-kevitra hananganana fanoherana ahafahana miatrika ny raharaham-pirenena.”, hoy ny fanazavana voaray. Ny alatsinainy ho avy izao no fantatra fa omena anarana manokana io kaomity io ary amin’io fotoana ihany koa no hanomezan’ireo mpikambana ny rafitra mazava ao anatiny. Raha tsy misy ny fiovana dia aorian’izay no hamoaka ofisialy ny anarana omena izay ho lehiben’ny mpanohitra ireo mpizaika nandritra ity fihaonam-ben’ny mpanohitra tetsy Anosy ity. “Ny kaomity dia handinika ny anarana ny omena azy ary handinika ny rafitra hatao ao anatiny manomboka anio. Mety amin’ity herinandro ity dia hivoaka ofisialy ny fikambanan’ny lehiben’ny mpanohitra eto Madagasikara”, hoy hatrany ny fanazavana.
Ny antoko Tiako i Madagasikara no anisany efa nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny maha mpanohitra azy. Efa nakatoavin’ny Minisiteran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany koa izay maha mpanohitra azy izay. Hatreto anefa tsy mbola mipetraka mazava izay tena ho lehiben’ny mpanohitra ary mbola hifandroritana fatratra. Nandritra io fihaonam-ben’ny mpanohitra io dia tsikaritra fa samy mikendry mafy ny hahazo izay toerana izay ireo mitonona ho mpanohitra. Fomba fijery iray noentin’izy ireo ny hoe, tsy maintsy mpanohitra mahavita azy no omena ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra.
“Be dia be ny rafitra hatao. Ireo rehetra nandray anjara fitenenana toy ny antoko tim sy izay antoko efa nahazo fankatoavana ho mpanohitra dia tsy maintsy hojerena hoe izay no tena hatao lehiben’ny mpanohitra. Ilaina ny fisian’ny mpanohitra mahavita azy fa tsy mpanohitra anarana fotsiny”, hoy hatrany ny fanazavana. Andrasana, araka izany, izay tena tapaka ho lehiben’ny mpanohitra eto Madagasikara. Andrasana tahaka izany ihany koa ny fivoahan’ilay lalàna hifehy ny asa fanoherana hataon’izy ireo.